Momba anay - MIT Automobile Service Company Limited
MAXIMA, mpikambana ao amin'ny vondrona MIT, no marika voalohany amin'ny indostrian'ny fikojakojana fiara mpitondra entana sinoa ary iray amin'ireo toby famokarana fitaovana fanarenana fiara-tena lehibe indrindra, izay faritra famokarana 15.000㎡ ary ny vokatra isan-taona dia mihoatra ny 3.000 set. Ny tsipika famokarana dia manarona ny fananganana andry mavesatra, ny fananganana sehatra mavesatra, ny rafitra fampifanarahana vatana, ny rafitra fandrefesana, ny milina welding ary ny rafitra misintona nify.
Ny fampiakarana adidy MAXIMA mifantoka amin'ny mpanjifa dia be mpampiasa amin'ny ozinina isan-karazany, tobim-pikojakojana fiara fitaterana fiara sy indostrian'ny serivisy fiara manokana, amidy any Etazonia, Canada, Australia, United Kingdom, France, Netherlands, Spain, Norway, Portugal, Austria, Switzerland, Russia, Brazil, India, Chile sns Tamin'ny 2007, MAXIMA fanondranana andraikitra mavesatra dia voamarin'ny CE. Tamin'ny taona 2015, MAXIMA fiakarana adidy mavesatra dia nohamarinin'ny ALI, lasa mpamokatra entana mavesatra andraikitra nankatoavina ALI tany Sina. Ireo mari-pankasitrahana ireo dia manatsara ny fahatokisan'ny mpanjifa ary manampy ny MAXIMA hanompo ny mpanjifa anatiny sy ivelany.
Ny fitazonana ny zava-baovao dia fikatsahana tsy an-kijanona ataon'ny MAXIMA. Tamin'ny taona 2020, ny fanondranana andraikitra mavesatra an-tsehatra dia nipoitra taorian'ny ezaka maharitra ary koa fanamarinana sy fanaraha-maso miverimberina. Ny fananganana sehatra an-kianja dia nahazoana mari-pahaizana CE ihany koa. Ankoatr'izay, ny departemantan'ny R&D dia nanatsara ny fananganana tsanganana mavesatra be loatra miaraka amin'ny fihetsika mandeha ho azy. Mety ho mora kokoa kokoa ny mamindra ny tsanganana tsy misy tanjaka sy fotoana. Ity asa ity dia hisafidy amin'ny vokatra ho avy.
MAXIMA dia manana ivon-toerana R&D Center Fikojakojana miavaka sy fihenam-bidy miaraka amin'ny ivon-toerana R&D mahay indrindra sy ivon-toerana fanamboarana vatana. Ankoatr'izay, MAXIMA koa dia manana ivon-toeram-piofanana manamboatra vatana farany mandroso sy lehibe indrindra. Vita amin'ny tsipika famokarana any an-toerana, ny fitaovana fanaraha-maso, ny fahaiza-manao R&D mahery, ny mpiasa mahay sy ny rafitra tonga lafatra, mifehy ny famokarana, ny kalitao, ny serivisy ary ny varotra.
Amin'ny maha manam-pahaizana an'izao tontolo izao ny vahaolana amin'ny fanamboarana fiara sy ny vahaolana amin'ny fanamboarana fiara tsy fantatra, MAXIMA dia hanome fitaovana sy fitaovana azo antoka, matihanina ary mandroso, hanampy ny mpanjifa hamaha olana, hampitombo ny fahombiazany ary hampihena ny hamafin'ny asa.
Fampisehoana efitrano santionany